चारै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेको सरकारले आगामी निर्वाचनमा पनि परिचालन गर्ने
काठमाडौं : यतिवेला, करिब नब्बे प्रतिशत प्रहरी चुनावी सुरक्षाका लागि मैदानमा पुगेका छन् । पहिलो निर्वाचनमा परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीहरु आगामी निर्वाचनका लागि जिल्लाहरुमा सिफ्ट भैरहेको सुरक्षा अधिकारीको भनाई छ । थप चुनौति महशुस गरेको सुरक्षा निकायले आगामी निर्वाचन भने शान्तिपूर्ण हुने बताएको छ ।
करिब ७२ हजारको संख्यामा रहेको नेपाल प्रहरीको जनशक्ति प्रशासनिक कामकाज वाहेक ९० प्रतिशत चुनाव हुने जिल्लाहरुमा परिचालित भएका छन् । केहि जनशक्तिलाई रिजर्ब फोर्शका रुपमा तयारी अवस्थामा राखिएका छन् । यसका अतिरिक्त नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी वल, अनुसन्धान र म्यादी प्रहरीले शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा पहरा दिइरहेका छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचन सामान्यतया शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । दर्जनौं संख्यामा वम विस्फोट भए पनि अधिकांश नक्कली बमहरु भएको दावी गर्ने प्रहरीले निर्वाचन अवधिमा ६ वटा सवारी साधनमा मात्र तोडफोड र आगजनीको प्रयास भएको जनाएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोडिएका केहि जिल्लाहरु मात्र थिए । तर यसपटक भने रक्सौल, काकडभिट्टा, रुपेडिया जस्ता मूख्य नाकाहरु नै भारतसँग जोडिएका छन् । ७२ घण्टा अघि नै नाका शील गरिने परम्परालाई निरन्तरता दिदै ती जिल्लाहरुले तयारी गरेका छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचनवाट प्राप्त अनुभव र कमजोरीलाई दोहोरिन नदिन सुरक्षा व्यवस्था मजवुत बनाएको प्रहरीको दावी छ । ४५ वटा जिल्लाहरुमा हुन गैरहेको निर्वाचन पहिलो चरणकोभन्दा सुगम त अवश्य छ नै, तर चुनौतिहरु यस्ता हुन सक्ने आँकलन गरिएका छन् ।
१. चुनाव वहिष्कार गरेको नेकपा विप्लवको गतिविधिहरु ।
२. साना हतियार र तराइमा सक्रिय भूमिगत समूहहरु ।
३. खुल्ला सिमा नाकावाट हुनसक्ने घुसपैठ ।
४. दलगत मुठभेड र झडपहरु ।
तर यी सबै चुनौतिहरुको सामना गर्ने गरी सुरक्षा रणनीति तय भएको प्रहरीले बताएको छ । सुरक्षा निकाय र स्थानीयदेखि केन्द्रीय सुरक्षा समितिसँग समन्वय गरिरहेको निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन सुरक्षाप्रति ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ ।
म्यादी प्रहरी सहित चारै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेको सरकारले आगामी निर्वाचनमा पनि तीन घेराको सुरक्षा रणनीति अपनाएको छ । यसपटक भने सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई अधिकतम वल प्रयोगसम्मको अधिकार दिएका छ ।